Qaramada Midoobay oo cambaaraysay qorshaha Israa’iil ee deegaamaynta Daanta Galbeed | Baydhabo Online
Qaramada Midoobay oo cambaaraysay qorshaha Israa’iil ee deegaamaynta Daanta Galbeed
Qaramada Midoobay ayaa cambaaraysay qorshaha ay Israa’iil guryo dheeri ah uga dhisayso dhulka la haysto ee Daanta Galbeed.
Afhayeen u hadlay Qarammada Midoobay ayaa sheegay in “qorshe aan la isla ogayn” uu caqabad ku hayay qorshihii nabadda ee xalka labada dawladood ahaa.
Talaadadii ayuu sheegay Ra’iisalwasaare Benjamin Netanyahu in Israa’iil ay Yuhuuda u dhisi doonto 2,500 oo guri oo dheeraad ah, arrintaas oo lagaga jawaabayo baahida guryaha ee jirta.
Waa baaqii labaad ee noocaas ah ee ay Israa’iil ka soo yeera tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxwayne Donald Trump.
Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in qorshahan guryaha lagaga dhisayo dhulkii ay xukuumadoodu dagi lahayd mustaqbalka in uu wax u dhimayo rajadii laga qabay nabadda.
Stephane Dujarric, oo ah afhayeenla xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay Antonio Guterres, ayaa sheegay “in xoghayaha guud uusan haynin xal labaad oo aan ahayn kan labada xukuumadood.
Trump oo danjire ka dhigay nin taageersan haysashada dhulka Falastiiniyiinta
Askarta Carabta ee ku nool Israel oo u dagaalamaya Israel
“Sidaas daraadeedna in go’aan kaste oo aan la isla ogayn uu caqabad ku noqon karo hadafkii labada xukuumadood ahaa, uuna aad uga walaacsan yahay xoghayaha guud”.
“Waxaa loo baahan yahay in labada dhinac ay isugu yimaadaan wada xaajood si loo gaaro xalka labada xukuumadood ee Israa’iil iyo Falastiin, labo xukuumadood oo labada dad ay kala yeeshaan.”
Trump ayaa bidhaamiyay in uu taageero ka badan middii Obama siin doono deegaamaynta, wuxuuna safiirka Israa’iil u magacaabay qof taageersan deegaamaynta Israa’iil.
Bishii hore wuxuu dhaliilay in Obama uu diiday in codka qayaxan u adeegsado qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ahaa in Israa’iil ay si dhakhso ah u joojiso dhamaan deegaamaynta waxayna ka digeen in “halis galinayso xalkii labada xukuumadood ahaa”.
Illaa 500,000 oo Yuyuud ah ayaa ku nool 140 deegaan oo la dhisay tan iyo markii ay ay Israa’iil qabsatay Daanta Galbeed iyo Bariga magaalda Qudus 1967-dii.
Deegaamayntaas ayaana sharcidaro ah marka la eego qawaaniinta caalamiga ah, inkastoo ay Israa’iil dood ka keentay arrintaas.
Inta badan guryahan cusub ee la meelmariyay waxaa laga dhisidoonaa goobaha hadda ay guryuhu ka dhisan yihiin oo ku jiraan 902 Ariel iyo 652 Givat Zeev.
Boqol gurina waxaa laga dhisi doonaa Beit El, oo u dhaw deegaanka Ramallah, waxaana lagu soo warramayaa in kharashka lagu dhisayo laga helay mu’asasad ay gacanta ku hayaan qoyska ared Kushner oo ah wiil uu sodog u yahay Trump oo lataliye sarena u ah.
Xal ma loo heli karaa deegaameynta Yuhuuda?
Maxkamadda ICC oo booqaneysa Israa’iil iyo Falastiin
Israa’iil: Masuul hay’ad ayaa Xamaas lacag siiyay
Ku dhawaaqitaankan ka dibna, Netanyahu ayaa Twitterka ku soo qoray ” Waan dhisaynaa – waana sii wadidoonaa dhisidda.”
Netanyahu ayaa sheegay in uu wali taageersan yahay xalka labada xukuumadood, laakiin Axaddii waxaa la sheegay in uu wasiirro u sheegay in uu qaadayo xayiraaddii saarnayd dhismeyaasha Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus, iyadoo dawladda hoose ay meelmarisay ruqsadaha 566 guri oo cusub.
Hanan Ashrawi oo ka mid ah masuuliyiinta sare Ururka Xoraynta Falastiin ee PLO ayaa si wayn u dhaliishay go’aankii Talaadada.
“Mar kale Israa’iil waxay caddaysay in sida ay uga go’an tahay xatooyada dhulka iyo gumaysiga aysan uga go’nayn in la helo xal labo xukuumadood ah”. ayay ku sheegtay war qoraal ah oo ay soo saartay.
Ashrawi waxay ku baaqday in Maraykanka iyo beesha caalamka intiisa kalaba “ay qaadaan tallaabo wax ku ool ah oo lagu soo afjarayo dhamaan deegaamaynta isla markaasna Israa’iil lagula xisaabtamo qorsheyaashaas masiibada iyo ciqaabta ah, lana cuno qabateeyo inta aysan dhamystirin burburinta xadka iyo qaabka Daanta Galbeed.